I-Edgemesh: I-ROI ye-Ecommerce Site Speed ​​njengesevisi | Martech Zone
NgeSonto, uDisemba 5, i-2021 NgeSonto, uDisemba 5, i-2021 U-Jacob Loveless
Emhlabeni wokuncintisana we-e-commerce kunento eyodwa eqinisekile: Isivinini sibalulekile. Study ngemuva cwaningo iyaqhubeka nokufakazela ukuthi isayithi elisheshayo liholela ukwanda kwamazinga okuguqulwa, ukushayela amanani aphezulu okukhokha futhi kuthuthukisa ukwaneliseka kwamakhasimende. Kodwa ukuletha ulwazi lwewebhu olusheshayo kunzima, futhi kudinga kokubili ulwazi olujulile lokuklanywa kwewebhu kanye nengqalasizinda yesibili "esemaphethelweni" eqinisekisa ukuthi isayithi lakho liseduze namakhasimende akho ngangokunokwenzeka. Kumasayithi we-e-commerce, ukuletha ukuzizwisa kokusebenza okuphezulu kungase kube nzima kakhulu—ngezinkundla eziningi nokuncika kwezinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle okushayela inkimbinkimbi ku-11.
Ukungena kulesi sikhala kuyinto eyaziwa kancane, futhi inkampani ethi "Speed ​​as a Service" eyimfihlo ebizwa kanjalo Edgemesh. Yasungulwa ngo-2016, i-Edgemesh inikeza isevisi yokusheshisa i-turnkey leyo inika amandla amakhulu ezitolo eziku-inthanethi eziletha okunye ukuzizwisa okushesha kakhulu ku-inthanethi kuwebhu. Kulokhu okukhethekile kwe-Martech, singena sijule kokuthi i-Edgemesh iyini, ukuthi isebenza kanjani nokuthi hlobo luni lokusebenza okwandisa amakhasimende akubonayo ngenkundla yokusheshisa.
Ngo-2021, u-Edgemesh wakhipha Iseva ye-Edgemesh umkhiqizo-inkundla egcwele yokusheshisa enqenqemeni yesevisi eletha ngokusobala amasayithi angama-30-70% ngokushesha. I-Edgemesh Server, esebenza kuwo wonke amanethiwekhi amabili okulethwa kokuqukethwe (i-Cloudflare ne-Fastly), iyinkundla yokusebenza kwesevisi ephelele. Ngokuka-Edgemesh, Iseva ithatha noma iyiphi iwebhusayithi ekhona bese iyithuthela ngaphandle komthungo onqenqemeni lwenethiwekhi kuyilapho yengeza izithuthukisi eziningi zokulungisa ukusebenza. Okuningi kulokho ngezansi.
I-Edgemesh Client iyisiphequluli esingaphakathi, noma uhlangothi lweklayenti, isisombululo sokusheshisa. Amakhasimende engeza iKlayenti le-Edgemesh ngokuhlanganisa okukodwa noma ngokwengeza umugqa owodwa wekhodi kusayithi labo elikhona. Ama-plugin ayatholakala okwamanje WordPress, Thenga kanye ne-Cloudflare. Inqubo yokufaka iqondile futhi ithatha cishe imizuzu emi-5.
Ukusuka lapho, iklayenti le-Edgemesh lengeza izici ezimbili: ukuqapha komsebenzisi wangempela (ukukhombisa ukusebenza kwesayithi okusekelwe ekuhlangenwe nakho kwangempela kwamakhasimende) kanye nokugcinwa kwesikhashana ohlangothini lweklayenti. U-Edgemesh wengeza ukugcinwa kwesikhashana kwekhasimende okuhlakaniphile ngohlaka Lwesisebenzi Sesevisi—imodeli eyaklanyelwe ukuvumela amawebhusayithi ukuthi asebenze ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Lokhu kusiza ukukhulisa inani lokuqukethwe isiphequluli esingakubamba endaweni, kunciphisa izicelo zekhasimende kuseva ngokwayo. Lokhu kukodwa kunikeza ukusheshisa kwezinto ezibonakalayo, kodwa umlingo uvela kumqondo wawo “wangaphambi kwenqolobane”.
Ngokusekelwe ekusebenzelaneni kwangempela komsebenzisi namamethrikhi okusebenza, u-Edgemesh ngobuhlakani wandisa inqolobane yesiphequluli ukuze aqinisekise ukuthi izimpahla eziningi zilayishwa kusengaphambili kubasebenzisi—empeleni iqagela ukuthi ikhasimende lizoya kuphi ngokulandelayo futhi lizame ukuhlala isinyathelo esisodwa phambili. Umthelela wokusebenza ungabonakala kungosi ye-Edgemesh, lapho abasebenzisi “Abasheshisiwe” kube yilabo labo inqolobane yohlangothi lweklayenti inikeze kubo u-10% noma ngaphezulu wekhasi, futhi abasebenzisi “Abangasheshisiwe” kube yilabo abangazuzanga kangako. inqolobane yohlangothi lweklayenti i-Edgemesh iyakha. Ngokusekelwe ocwaningweni lwangempela lwamakhasimende, iKlayenti lase-Edgemesh lisiza ukukhulisa isivinini sesayithi ngo-20-40%.
I-Edgemesh Acceleration Ngempumelelo
Ukusebenza Kweklayenti le-Edgemesh
Ukusebenza Kweseva ye-Edgemesh
Iklayenti liphinde lithwebule futhi linike amandla izinga elijulile ledatha yokusebenza. Le datha iqoqwa kubasebenzisi bangempela kuwebhusayithi yakho—lokho okubizwa ngokuthi idatha yasendle. Kukhona izimbangi eziningi kulesi sikhala, okuhlanganisa i-New Relic, i-App Dynamics ne-Datadog—kodwa ingosi ye-Edgemesh ihloselwe ukubonisa idatha yokusebenza ngezindlela ezihlaziywe kusengaphambili esizithole zinembile.
Ngokwesibonelo, imethrikhi ngayinye yokusebenza inamaleveli achazwe kusengaphambili alokho okubhekwa njengokushesha, Okumaphakathi, Nokunensa (umbala ofakwe ikhodi ukuze ube lula)—okuvumela noma ubani ukuthi akhombe ngokushesha izindawo ezidinga ukuthuthukiswa. Yonke imethrikhi yokusebenza etholakalayo ukuze ihlaziywe iyathathwa futhi ukusebenza kungahlukaniswa ngedivayisi, isistimu yokusebenza, indawo noma ikhasi ngalinye. Ngaphezu kwalokho, iphothali ibonisa idatha yesikhathi yeleveli ye-API—ikuvumela ukuthi ubone umthelela wemibhalo yezinkampani zangaphandle kanye nezinhlelo zokusebenza ekusebenzeni kwesayithi lakho, futhi ngezixhumanisi ezisheshayo zokukhombisa izinhlelo zokusebenza ezihamba kancane kuphela.
I-Edgemesh Server iyinkundla yokusheshisa isevisi egcwele. Ngokungafani neKlayenti le-Edgemesh, isixazululo Seseva sidinga inqubo yokugibela umuntu ngamunye. Sekushiwo lokho, ukuthunyelwa kulula ngendlela efanayo—namakhasimende avele abuyekeza irekhodi elilodwa le-DNS ukuze athuthele endaweni yesikhulumi se-Edgemesh.
I-Edgemesh Server ihlezi phezu kwamanethiwekhi amabili amakhulu okulethwa kokuqukethwe—i-Cloudflare ne-Fastly. Nge-Edgemesh Server, izivakashi zifinyelela inguqulo “esenqenqemeni esetshenziswayo” yewebhusayithi yakho, yehlisa kakhulu isikhathi esithathwayo ukuletha ikhasi. Ngaphezu kwalokho, i-Edgemesh Server inika amandla ngokuzenzakalelayo nangokusobala inani lokulungisa ukusebenza kwebanga lebhizinisi, okuhlanganisa:
Ukuthuthukisa izithombe ngamafomethi esizukulwane esilandelayo afaka i-AVIF
Ukuthuthukisa iphrothokholi yokuxhuma ibe yi-HTTP/3 uma itholakala
Ihambisa okuqukethwe kumsuka (isizinda ukungahlukaniseki)
Ingeza iziqondiso zokulayisha kuqala ezihlakaniphile kanye nokulayishwa kuqala kwekhasi okuguquguqukayo
Ukwengeza iKlayenti le-Edgemesh
Ezinkampanini ze-e-commerce, i-Edgemesh Server ibavumela ukuthi bahlale endaweni yabo ekhona (isb Thenga) kodwa zuza izinzuzo zokusebenza zesayithi lesitayela esingenakhanda esiphethwe ngokwezifiso. Njengoba sesisemva kwethu isikhathi samaholide, u-Edgemesh wabelane ngezibonelo ezithile zezinzuzo zokusebenza ezibonwe amakhasimende abo nge-Edgemesh Server:
Imiphumela Yomhlaba Wangempela
U-Edgemesh unenani lezibonelo zezifundo ezitholakala kuwebhusayithi yabo, kodwa banikeze izibonelo ezinemininingwane yakho kokubili izinzuzo zokusebenza kanye nemithelela engumphumela wezinga lokuguqulwa. Ngokusekelwe kudatha enikeziwe esingaqinisekisa—izindaba zesivinini!
U-Jake Loveless ube nomsebenzi weminyaka engamashumi amabili wokwenza ubuchwepheshe buhambe ngokushesha. Kusukela ezinhlelweni zokuhweba ezibambezelekayo eziphansi ku-Wall Street kuya ezinkundleni zewebhu ezinkulu zoMnyango Wezokuvikela kuya kumanethiwekhi ama-microwave ezinkampani zokuxhumana ngocingo - U-Jake uye wasiza ekuqhubekiseleni phambili isofthiwe emikhawulweni yesivinini emisha. Namuhla, uJake uyagijima Edgemesh, inkampani yomhlaba wonke yokusheshisa iwebhu ayisungule ngokubambisana nabalingani ababili ngo-2016. I-Edgemesh isiza izinkampani ze-eCommerce kuzo zonke izimboni nezinkundla eziningi ukuletha ukulayisha kwamakhasi asheshayo okungu-20-50% kubasebenzisi emhlabeni jikelele.